Keeniyaa: Naayiroobii keessatti ajjeefamuun konkolaachisaa mormii kaase - BBC News Afaan Oromoo
Keeniyaa: Naayiroobii keessatti ajjeefamuun konkolaachisaa mormii kaase
20 Guraandhala 2020
Magaalaa gudditti Keeniyaa Naayiroobii keessatti eega waahillisaanii rasaasaan hospitaalaatti ajjeefamee booda konkolaachiftoonni hiriira bahaniiru. Konkolaachisaan poolisiin ajjeefame jedhame kunis daa'ima dhukkubsatte gargaaraa ture.
Daani'eel Mibuuruu ganna 24 yoo ta'u daa'ima dhukkubsate san baraaruuf kan Naayiroobii keessatti gara hospitaalaa geesse.
Innis mootorasaa gara kutaa yaala tasaa osoo ofuu eegdotaan ittifame. Atakaaroo uumame booda poolisiin waamame.
Dhimma kanarratti poolisiin yaadaa hin kennine. Namoonni immoo qorannoo akka taasifamu gaafachaa jiru.
Namni kun mootora 'Boodaa Boodaa ' jedhamuun beekamu oofa.
Tajaajjilli geejjiba motoraa boodaa boodaa jedhamuun beekamu kun sirna geejjibaa biyyattii keessatti tajaajilaa kennu keessaa isa tokkodha.
"Dargaggeessi daa'ima rakkatte kana gargaaraa ture. Innis balaan tasaa kamuu tajaajila fayyaa keessatti yeroo kamuu dursi ni kennamaaf jedhee yaadeeti," jedhan Dura taa'aan Waldaa Nageenya BoodaaBoodaa kan ta'an Keevin Mubaadi.
Miseensi paartii mormituu Keeniyaa lammata biyyaa ari'aman
Innis abdii qaamni poolisii walaba ta'e dhimmicha ni qorata jedhuun miseensonni isaanii akka "tasgabbaa'an" gaafateera.
Haaluma kanaan poolisiin konkolaachisaa kana rasaasaan rukutee ajjeesses to'annaa jala ooleera.
Dhaabbanni Aminestii Internaashinaal dameen Keeniyaas dhimmichi akka qoratamuuf waamicha dhiheeseera.
Ibsi bahe akka agarsiisutti Daani'eel Mibuuruun humnoota nageenyaatiin arrabfamaa ture. Innis hospitaalatti dhukaasaa rasaasaa poolisiitiin akka ajjeefame ibsameera.
Miidiyaalee hawaasummaarratti namoonni hedduun poolisiin konkolaachisaa kana ajjeesee seeratti dhiyaatee akka qoratamu gaafatanis poolisiin garuu yaada kennuurraa of qusateera.
Daa'imni saffisaan hospitaalaa geeffamte "yaalaa haalaan argataa jirti, kanaafuu Daani'eel gootadha," jechuun Daayirektarri Aminstii Internaashinaal damee Keeniyaa kan ta'an Iruunguu Hawutan BBC'tti himaniiru.
Barreessaan beekamaa Keeniyaa Binyaavaangaa Waayinaayinaa du'e
Viidiyoo, Waalee fi Hinesee: Sirba aadaa Oromoo Keeniyaa